Malunga nathi -Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
Njengomboneleli omkhulu wase China kwiidartboard kunye neetafile zomdlalo, siyazinikela ekuboneleleni ngesisombululo esinye sokumisa kuzo zonke iibhilidi zakho kunye neemfuno zokudlala.
IWIN.MAX imele 'Yonke iMidlalo' kwaye ihlala ibeka inzame zokuyila, inoluhlu olubanzi lwemveliso egubungela iindidi ezahlukeneyo zemidlalo kunye nemidlalo.
Njengomboneleli omkhulu wase China kwiidartboard kunye neetafile zomdlalo, siyazinikela ekuboneleleni ngesisombululo esinye sokumisa kuzo zonke iibhilidi zakho kunye neemfuno zokudlala. Siphatha uluhlu olubanzi lweetafile zephuli, iitafile zebhola, iitafile zetennis, iitafile zehokhi, iibhodi zeebhodi, iibhodi zeebhodi zekhompyuter, izixhobo zedart kunye nokunye e China. Silungiselela abantwana kunye nabantu abadala.
Asimiselanga imigangatho yamashishini kuphela esemgangathweni kodwa uyilo lwangoku. Siyaqhubeka nokwandisa imveliso yethu ukuze sikwazi ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo ezivela kubaxhasi bethu.
WIN.MAX Sports ithengisa iimveliso zayo ngokuthe ngqo kubathengi ngokusebenzisa iivenkile ezithengisa iimveliso, iifemu zefektri, kunye ne-e-commerce kunye nabathengi bezorhwebo kwimixokelelwane yempahla yezemidlalo, abathengisi abakhethekileyo, abathengisi abaninzi, iiklabhu zokomelela komzimba kunye nabasasazi. NgoDisemba ngo-2020, iWIN.MAX yezeMidlalo umbutho wentengiso ugubungele amazwe angama-20.
Umzi-mveliso / uMmandla Kumgangatho 2, No.6 Isakhiwo, No. 49, Zhongkai 2 Road, Huizhou City, kwiPhondo Guangdong, China
Unyaka oMiselweyo 2013
Uhlobo lo shishino Umenzi, iNkampani yokuThengisa
Imveliso yeeLines 3
Imvumelwano neMveliso Inkonzo ye-OEM
Ixabiso leMveliso loNyaka I-US $ 5 yezigidi- i-US $ 10 yezigidi
Umthamo weR & D Kukho / bangaphantsi kwabantu aba-5 iinjineli zeR & D kwinkampani.
Iqela lethu linabasebenzi abanamava kule marike, kumgca ofanayo weshishini kule minyaka ili-10 idlulileyo. Iqela lethu labantu abathengisayo banolwazi lokuzibonela kwimarike kwaye igcina ubudlelwane obuhle kunye nabathengi.
Sikumishini yokunceda umhambisi phambili amashishini abo kwaye bafumane ukhuphiswano ngenkxaso yeemveliso zethu.
SiyiNkampani yezeMidlalo. SiyiWIN.MAX.
I-WINMAX kukugxila kophawu ekunikezeleni uLuhlu olupheleleyo lweeMpahla zeMidlalo zoLonwabo oluPhakamileyo kwihlabathi.